विमल बेल्जियमको तेस्रो डिभिजन क्लब लिएर्समा प्रशिक्षणरत | Hamro Khelkud
विमल बेल्जियमको तेस्रो डिभिजन क्लब लिएर्समा प्रशिक्षणरत
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका युवा फरवार्ड विमल घर्ति मगर विगत एक महिनादेखि बेल्जियमको तेस्रो डिभिजन क्लब लिएर्स केम्पेनजोनेनमा प्रशिक्षणरत छन् । विमलले क्लबमा सिनियर टोलीसँग नियमित प्रशिक्षण गर्दै दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन् । उनको क्लबमा अनुबन्ध हुने/नहुने भन्नेबारे भने यसै महिनाको अन्त्यसम्म पक्का हुनेछ ।
लिएर्सले विगतमा पनि विमललाई अनुबन्ध गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर उनको उमेर १८ वर्ष नपुगेका कारण व्यवसायिक अनुबन्ध गर्न नसक्ने हुँदा त्यस समय उनले युरोपेली क्लबमा प्रशिक्षणमा मात्र गएर फर्कनु परेको थियो । उनले युवा अवस्थामा बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका क्लबहरुबाट प्रशिक्षण लिएका थिए ।
सन् २०१३ मा डच क्लब एफसी ट्वेन्टे पुगेका उनले त्यस लगत्तै युरोपको ठुला क्लबहरु नजर लगाएको खबर बाहिरिएको थियो । उनले त्यसलगत्तै सन् २०१४ को सुरुवातमा एन्ड्रेलेक्टमा गएर पनि प्रशिक्षण गरे । उनले त्यसबेला केहि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । एन्ड्रेलेक्टले विमललाई अनुबन्धन गर्न खोजेपनि फिफा नियमानुस्र व्यवसायिक अनुबन्धन गर्न सम्भव नहुँदा विमल नेपाल फर्केका थिए । उनले नेपालमा पनि केहि प्रतियोगिता खेले ।
सन्२०१५ मा उनी बेल्जियमको शीर्ष डिभिजन क्लब जेंक पुगेका थिए । उनले त्यहाँपनि २ महिने प्रशिक्षण गरे । त्यसपछि नेपाल फर्केर अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेपछि उनले अर्को डच क्लब ब्रुजमा ट्रायलका लागि मौका पाए । उनको ट्रायल सफल हुन नसक्दा उनले फर्केर राष्ट्रिय लिगमा सुदूरपश्चिम फुटबल क्लबको जर्सी लगाए ।
सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा उनी स्पेनको मार्बेला युनाइटेड फुटबल क्लबमा पुगे । तर चोटका कारण उनले लामो समय बस्न पाएनन् । सन् २०१६ को मे महिनामा स्पोर्टीङ लोकेरेनले उनलाई ट्रायलमा बोलायो । तर पारीवारिक समस्याका कारण बिचमा नै फर्कनुपर्दा उनले फेरी पनि अनुबन्धन गर्न पाएनन् । त्यस समय क्लब विमलबाट निकै प्रभावित रहेको खबर पनि आएको थियो ।
त्यसपछि उनले रुस्लान थ्री स्टारमा अनुबन्धन हुँदै केहि प्रतियोगिता खेले । भारतको बोर्डोलोई ट्रफी जिताउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । भारतीय क्लब मोहून बगानले उनलाई आई-लिगको लागि अनुबन्धन गर्यो । तर अन्तिम केहि खेलमा विमलले अपेक्षित छाप बसाउन नसक्दा क्लबले उनलाई अनुबन्धन लम्ब्याउन चाहेन ।
पल्सर ए डिभिजन लिगमा च्यास युवा क्लबका लागि खेलेका उनले लिगको बिचमा नै क्लब छाडेका थिए । बेल्जियमको क्लब लिएर्सले प्रशिक्षण तथा ट्रायलका लागि बोलाएपछि उनी क्लब छाडेर त्यसतर्फ लागेका हुन् । विमलले त्यहाँ रहेर झन्डै एक महिना प्रशिक्षण गरिसकेका छन् ।
कस्तो क्लब हो लिएर्स ?
दुई वर्ष अघिसम्म बेल्जियमको शीर्ष डिभिजन लिग खेलिरहेको लिएर्स अहिले भने टुक्रिएर तेस्रो डिभिजनमा खेलिरहेको छ । ४ पटक बेल्जियमको शीर्ष श्रेणी लिग जितेको लिएर्स एसके मे २०१८ मा टाट पल्टेपछि टुक्रिएको थियो । दुई भागमा बाँडिएको क्लब भिन्नै क्लबहरुसँग जोडिएर पुन: फुटबलमा होमिए ।
विमल आबद्ध भएको क्लबले लिएर्सको पुरानै लोगो लिएर तेस्रो डिभिजनको क्लब एफसी ओस्टरजोनेनसँग गाभियो । अर्को टुक्रा संलग्न क्लबका केहि समर्थक लाइरा-लिएर्स बेर्लारनामक क्लब स्थापित भयो । लिएर्सले आफ्नो खेल्ने मैदान परिवर्तन गरेपछि समर्थकहरुले क्लबको अस्तित्व जोगाउने हेतुले यस स्थानीय क्लबसँग नाम गाभेका हुन् । यो क्लब बेल्जियमको पाँचौ श्रेणीमा खेल्छ ।
लिएर्स हाल तेस्रो श्रेणीमा भएपनि क्लबले स्तरीय खेलाडी अनुबन्धन गर्दै आएको छ । क्लबले छिट्टै शीर्ष श्रेणीमा फर्कने लक्ष्य बनाएको छ । हाल १६ टोली सम्मिलित लिगको ६ खेल सकिएको छ र क्लब मध्ये तालिकामा अवस्थित छ । लिएर्सले ६ खेलमा ९ अंक जोडेको छ । लिगको समाप्तिमा शीर्ष ४ टोली प्लेअफ खेल्नेछन् । लिगको अंकलाई आधा गरेर प्लेअफको चरणमा हिसाब हुने प्रावधान रहेको छ ।
विमलले लिएर्सबाट आइतबार पनि एक मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । नेदरल्यान्ड्सको शीर्ष श्रेणीको क्लब रोडा जेसीविरुद्ध उनले दोस्रो हाफ खेलेका थिए । उक्त खेलमा क्लब २-० ले पराजित भएको थियो । त्यसअघि लिएर्सले खेलेको एक मैत्रीपूर्ण खेलमा उनले गोल पनि गरेका थिए ।
के भन्छन् विमल ?
विमलले पछिल्लो समय निकै कडा मिहिनेत गरिरहेको बताएका छन् । ‘ मैले यहाँ आएर निकै मिहिनेत गरिरहेको छु । यहाँको स्तर निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ र आफूलाई यहाँसँग समन्वय गर्न केन्द्रित छु । क्लबमा आएर मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि सहभागिता जनाएको छु । राम्रो हुनेमा आशावादी छु ,’ उनले भने ।
मैत्रीपूर्ण खेलका केहि तस्बिरहरु :